Ukusakazeka okuphansi - JJD MachINERY CO., LTD.
LLE PRESSURE CASTING
JJD ngumkhiqizi wokuphonsa ingcindezi onomfutho ophansi.
Umsebenzi wethu ukuhlinzeka ukuphonsa kwe-aluminium ingcindezi ephansi ngekhwalithi ye-premium ngensimbi yokuncintisana kanye nensizakalo eyengezwe ngexabiso kumakhasimende ethu .. Imikhiqizo yethu yokuphonsa ingcindezi ephansi ye-aluminium igcina ukuguquguquka okukhulu kuhlelo lokukhiqiza nokuthumela, olusenza sikwazi ukuhlangabezana kangcono nezidingo zamakhasimende. .
Imikhiqizo yethu yokuphonsa ingcindezi ephansi ye-aluminium inikelwa embonini ebanzi, kufaka phakathi imboni yezimoto, izilawuli eziphezulu zamandla kagesi, izesekeli zokwakha, imishini yezemidlalo, ulwandle nobunjiniyela bobuchwepheshe njll. Lezi zingxenye zokuphonsa izingcindezi ze-aluminium eziphansi zithunyelwa kakhulu eNyakatho Melika naseYurophu.